Umatshini wokushicilela oshushu weFilimu abaThengi kunye neFektri - China AbaQinisekisi beFilimu abaShushu abaShushu
1.Product Code: YS-1027 2.Width: 1260CM 3.Material: PET 4.Thnessness: 0.028mm 5.Specification: 500M / roll or Customized 6.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Design Hot Ukunyathela ngefoyile ye 1.PVC Imabhile yokunyathela ifreyim eshushu isetyenziswa ikakhulu kwiphepha leemarble le-UV kunye neepaneli. Ingayimodeli emarmore emiselweyo, iinkozo kunye neepatheni zoyilo. 3. Emva kobuso bokudlulisa ifilimu ye-UV, ukutyabeka kwe-DU kunamathela kakuhle. Le mveliso ifanelekile kwiintlobo ezahlukeneyo zemiyalezo eyahlukeneyo yenkqubo yokuhambisa, b ...
Ikhowudi yemveliso: YS-1034-5 Ububanzi: 1.26M Ubume beMveliso: I-PET bhanyabhanya + Icwecwe elingaphandle + Umaleko okhuselayo + Umaleko wokuhombisa + Umaleko wokuxhasa Ubungakanani: 0.028mm Ukucaciswa: 500M / roll okanye njengemfuneko. I-MOQ: I-5000M / iKhowudi ye-YS BRAND ye-UV yemabhile yokuhambisa ingqolowa kwifilimu ye-UV. Le mveliso ifanelekile kwiintlobo ezahlukeneyo zemiyalezo eyahlukeneyo yenkqubo yokuhambisa, kodwa ikwahlulahlulwe ngefoyile okanye ifilimu. 2.Umgangatho webhodi yokuhombisa ye-UV yipeyinti yokhuselo lokusingqongileyo, ngaphandle ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1046 3.Material: PET + UV Paint 4.Specification: 500M / Roll 5.MOQ: 5000M / Code 1.YS BRAND UV Mable Hot Stamping foil 2.PVC marble stamping eshushu ngefoyile ye isekelwe kwimarike kwavela ezahlukeneyo iimfuno ezahlukeneyo ukutyabeka post-processing kunye nophando kunye nophuhliso emva adhesion olomeleleyo iimveliso ezintsha. 3.Ukongeza, emva kwepeyinti ye-UV, ubulukhuni bayo buphuculwe kakhulu, bunxibe ukumelana kunye nokukrwela okunganyangekiyo, kwaye buya kupolishwa ngakumbi. 4.Le mveliso ifanelekile ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1052-2 3.Material ET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Grain Ubushushu Transfer foil 1.This imveliso isicelo UV ibhodi zokuhombisa , esetyenziswa ikakhulu kwii-KTV, iihotele, iihotele, iiklabhu, iiklabhu zasebusuku, iikofu kunye nezinye iindawo zokuzonwabisa ezikumgangatho ophezulu kwindonga yokuhombisa! Ingayimodeli emarmore emiselweyo, iinkozo kunye neepatheni zoyilo. 3. Emva kobuso bokudlulisa ifilimu ye-UV, ukutyabeka kwe-DU kunamathela kakuhle. 4.Le mveliso ifanelekile ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1083 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Design Hot Stamping foil Iimveliso zemiboniso bhanyabhanya ezihambisa ubushushu kufuneka zibekwe kakuhle, ngokuthe nkqo nangokuthe nkqo, kodwa hayi ngokuthe tye; akufuneki zibekwe kufutshane nobushushu, kwaye kufuneka zigcinwe kude kumthombo wobushushu, ngokubanzi zingama-25 ℃; kufuneka zithintelwe ngokungqongqo ekubeni zingafakwa manzi. Nje ukuba bancitshiswe, baya kuvelisa irhasi phantsi kobushushu obuphezulu kunye ne-sou ...
1.Width: 0.64 imitha / 1.26Meters 2.Code: YS-1526 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code PVC marble stamping foil ifilimu yokuhambisa ubushushu ineempawu zayo ezizodwa. Ukuze ufumane isiphumo sokunyathela eshushu esifanelekileyo, kufuneka silawule ngokungqongqo obona bushushu, uxinzelelo kunye nesantya. Inenkqubo engqongqo yesalathiso separameter: Ukuchongwa kweqondo lobushushu: xa iqondo lobushushu liphantsi kakhulu, kuyabonakala ukuba isitampu eshushu asikho okanye asiqinanga, kwaye iya kwenza uphawu ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YSD-1534 3.Material ET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND Marble Hot Stamping foil Ifilimu yokuhambisa ubushushu ineempawu zayo ezizodwa. Ukuze ufumane isiphumo sokunyathela eshushu esifanelekileyo, kufuneka silawule ngokungqongqo obona bushushu, uxinzelelo kunye nesantya. Inenkqubo engqongqo yesalathiso sepharamitha: Ukuzimisela koxinzelelo: uxinzelelo lwesitampu ngokubanzi yi-4-6 kg / cm2. Xa uxinzelelo incinci kakhulu, ayikwazi ukwenza bexhentsa eshushu umboniso ngqo su ...
1.Ikhowudi yemveliso: YS-1098 2. Igama leBrand: Shengpai 3. Ububanzi: 1260mm 4.Izinto: PET 5.Ukuqina: 0.028mm 6. Ukucaciswa: 500M / ROLL 7. MOQ: 5000M / Ikhowudi 8. Iinkcukacha zokupakisha: ibhokisi 9. Amandla okubonelela: 200000 SQM ngenyanga 10. Umphezulu: isilungiseleli seglosi, matt, embossed 11. Ixesha lokurhweba: FOB & CIF & EXW YS BRAND UV Wood Grain Design Hot Stamping Foil 1. PVC isinyithi eshushu sokunyathela sisekwe kwintengiso kwiintlobo ngeentlobo zeemfuno zokwaleka emva kophando kunye nophuhliso ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1548 3.Material ET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code YS BRAND PVC Marble Sheet Hot Stamping foil 1.PVC marble ishushu isitampu se-foil luhlobo izinto eziphakathi kwinkqubo yokuhambisa ubushushu. Inkqubo yokuprinta ubushushu kukuhambisa iipateni zokuhombisa kumphezulu wezinto zokuhombisa kumphezulu wezinto zokwakha zokuhombisa ngokufudumeza ifilimu yokuhambisa ubushushu kube kanye. Ingayindlela ephezulu yokuchaza imarble, iinkozo ...
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1572 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code SP YS Marble Design Ukunyathela ngefoyile ye. kwavela kwiindidi ezahlukeneyo zeemfuno zokwaleka emva kophando kunye nophando kunye nophuhliso emva kokubambelela ngokuqinileyo kwiimveliso ezintsha. 2.Umzekelo kaMarble unokwenziwa ube ngumfanekiso ngexesha elinye ngokusebenzisa ubushushu boshicilelo lwefilimu, ngaphandle kokuthelekisa umbala, kunye nepateni eyiyo enokuprintwa ngokulula.
1.Width: 1.26Meters 2.Code: YS-1581 3.Material: PET 4.Specification: 500M / ROLL 5.MOQ: 5000M / Code 1.YS Wood Grain Wall Board Hot Stamping foil 2.PVC Wood Pattern Pattern stamping foil Isekwe kwimarike evelayo ngeendlela ezahlukeneyo zokwenza imveliso emva kokulungiswa kunye nophando kunye nophuhliso emva kokubambelela ngokuqinileyo kwiimveliso ezintsha. 3.Ingangumzekelo wokhuni-wenkcazo ephezulu, kunye neendlela ezahlukeneyo zoyilo. 4. Emva kobuso bokudlulisa ifilimu ye-UV, i-PU yokugcoba ine-adhesion elungileyo. 5 ...
1.Width: 1.26Meters 2.Material ET 3.Specification: 500M / ROLL 4.MOQ: 5000M / Code YS BRAND PVC Marble Sheet Hot Stamping foil 1.Print transfer ubushushu yinkqubo entsha yoshicilelo. Inkqubo yokushicilela yahlulahlulwe yangamacandelo amabini: ukugqithisela ukuprintwa kwefilimu kunye nokulungiswa kokudluliselwa. Umzekelo uprintiwe ngaphambili kwifilimu. Ipateni eprintiweyo ityebile ngamanqanaba, ikhanya ngombala, yahlukile, incinci umahluko wombala kwaye ilungile ekuveliseni kwakhona. Inokuhlangabezana neemfuno zoyilo ...